जातीय बिभेदको मूल स्रोत नै हिन्दू धर्मशास्त्र हो यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई || सुनौलो नेपाल
जातीय बिभेदको मूल स्रोत नै हिन्दू धर्मशास्त्र हो यसलाई परित्याग गर्नुपर्छ: बाबुराम भट्टराई
भदौ १९ काठमाडौं पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष्य बाबुराम भट्टराईले हिन्दु धर्मले दलितलाई मान्छे नै नमान्ने भन्दै यसलाई किन स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले हिन्दू धर्मले जातप्रथा जन्माएको भन्दै जातीय बिभेदको मूल स्रोत नै हिन्दू धर्मशास्त्र रहेको बताए ।
भट्टराइले राज्यका बिभिन्न तहमा दलितको प्रतिनिधिको तथ्यांक पेश गर्दै जातीय जनसंख्याका आधारमा त्यो हुन नसकेको बताए । उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली कायम रहेसम्म दलितको प्रतिनिधित्व राज्यसत्तामा समानुपातिक नहुने पनि प्रष्ट पारे । भारतको संविधानका पिता मानिने भीम राव अम्बेडकरको प्रसंग स्मरण गर्दै दलितहरुलाई भने- कि त हिन्दू धर्मशास्त्र सच्याउनुपर्छ कि त तपाईंहरुले त्यो परित्याग गर्नुपर्छ । हिन्दूत्वको नाममा जातपात प्रथा कायम गर्नेमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन नाकाबन्दी नलगाएको ? यो प्रश्न हिँजो पनि उठेको थियो । धर्मको विषय भएकाले यसमा ती समुदायमा सामान्य विषय उठे पनि कोही निर्णयमा पुग्दैनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जातपात प्रथा मानवअधिकारको उल्लंघन भन्दै ऋग्वेदबाटै जातीय बिभाजन गरिएको बताए । दलितलाई मान्छे नै नमान्ने हिन्दू धर्म मान्ने दलितहरुमाथि समेत उनले प्रश्न उठाए । भट्टराईले भने- मैले बोलेँ भने डलर खाएर बोल्यो भन्छन् । यसमा तपाईंहरु बोल्नुपर्छ । पाप लाग्छ भने मलाई लागोस् तर तपाईंहरु हिन्दू धर्म किन स्वीकार गर्नुहुन्छ ? त्यसमा सुधार हुँदैन भने तपाईंहरुले किन मान्ने ? अम्बेडकर आफैं हिन्दू भएर जन्मिए, तर जातीय विभेदका कारण मर्ने बेलामा बुद्ध धर्म अँगाले ।